Shina : Azo Itokisana Ireo Mpampanofa Vatana Raha Ampitahaina Amin’ireo Manampahefana, Araka Ny Fanadihadihana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2017 14:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, Deutsch, English
Manambara amin'ny fomba mahagaga ireo valin'ny fanadihadihana iray natao tamin'ny aterineto taminà Shinoa maherin'ny 3 376 mpampiasa aterineto sy izay nozaraina tao amin'ny gazetiboky Insight China [amin'ny teny shinoa] fa ao amin'ny firenena, mireritreritra ny sasany fa ny mpampanofa vatana dia mbola azo itokisana kokoa noho ireo mpanao politika, ny mpampianatra ary na ny mpahay siansa koa aza !
Mampiseho ilay fanadihadihana [amin'ny teny anglisy] fa 7.9% tamin'ireo nohadiahadiana no mihevitra fa ireo mpivarotena dia olona azo atokisana : tonga dia ao aorian'ny tantsaha sy ny relijiozy izy ireo. Milaza ny taratasy navoaka tao amin'ny tranonkala China Daily [amin'ny teny anglisy] fa sady mahatalanjona no mahamenatra ny valiny tahak'izao. Manadihady ny fototra sy ny antony ara-tsosialy mahatonga ny toerana voalohany azon'ireo mpampanofa vatana ao anaty lisitra ilay lahatsoratra ary mamintina fa izany no vokatry ny tsy firaharahiana, raha tsy ny fanaovan'ny fanjakana tsinontsinona ny olom-pirenena mihitsy aza.
Amin'ny ankapobeny, ao Shina, ireo manampahefana eo an-toerana ao amin'ny Antoko [amin'ny teny anglisy] dia tsy manao taitra afa-tsy ho an'ny lehibeny, ary ny fanendrena azy, ny fisondrotany sy ny fanalàna azy ireo, dia mahàlana no mba avy amin'ny fanapahankevitry ny vondrom-piarahamonina heverina fa tokony ho tompoiny. Noho izany, manoro hevitra ny fanjakana ilay mpanoratra fa tokony hanao ezaka mba hamerenana amin'ny laoniny ny fitokisana azy ary ny dingana voalohany mankany amin'izany dia ny tsy fanaovan'ireo manampahefana tsinontsinona intsony ny tombontsoam-bahoaka. Tena toa malahelo tanteraka noho ny tsy fahampian'ny fitokisana ireo manampahefana ao amin'ny fanjakana ireo shinoa mampiasa aterineto. Ity misy fantina tsikera mikasika ilay lohahevitra tao amin'ny SouFun.com [amin'ny teny shinoa]:
Kanefa tsy mieritreritra aho hoe mitombina izany fanoharana izany. Raha ny mikasika ny voninahitra omena ireo mpampanofa vatana, toa tsy mahagaga raha tsaratsara kokoa ny fiahitàna azy ireny noho ireo manampahefana eo anivon'ny fanjakana, amin'ny fihazonana ny zava-misy hoe ny fandoavana ny volan'izy ireo dia aorian'ny fahavitàny ny ”tolotra” foana. Tokony oharina amin'ny sipan'ireo manampahefana shinoa ireo mpampanofa vatana, izay matetika dia omena karama mialoha.
Milaza ny iray hafa mpampiasa aterineto [amin'ny teny shinoa]:
Ny fanehoan'ny olona ny tsy fahampian'ny fitokisany ny fanjakana amin'ny fomba mahery vaika toy izany dia mampiseho fa efa rava tanteraka ny fitokisana ny Antoko Kaominista Sinoa.
Miombona hevitra amin'izay ny iray mpampiasa aterineto, hoe ny toetra ara-tsosialy amin'izao fotoana izao no tena antony [amin'ny teny shinoa]:
Avy amin'ny fiarahamonina manodidina daholo izany rehetra izany. Tsy manao afa-tsy ny mamerina maka ny teny filamatry ny dokambarotra fotsiny ny tenin'ireo manampahefana ao amin'ny fanjakana.
Nametraka tsikera iray tao amin'ny tranonkala Sina.com ny bilaogera iray mitondra ny anarana hoe Zuiyanwulong, izay milaza fa tany lonaka ho an'ny kolikoly ny didy jadon'ny antoko tokana [amin'ny teny sinoa]:
Hikiky ny fakan'ity firenena ity ny kolikoly fa maninona isika no mionona amin'izany? Araka ny hevitro, izany dia satria na miresaka betsaka mikasika izany sy mitaraina momba izany aza isika, tsy misy vokany ny ezaka ataontsika. Toa mahatsiaro tena ho tsy afa-manoatra isika. Tena mafy orina loatra ny rafitra jadona antoko tokana ka afaka manaiky kolikoly ireo manampahefana. Avy amin'izany no miraraka ny kitsolohan'ny (pyramide) kolikoly avy any an-tampon'i Shina. Voaaro ireo manampahefana ao anatin'io rafitra io, izay mahatonga ny tsy fahafahana manafoana ny kolikoly.
Ankoatra ny fanehoankevitra mitokantokana, afaka mahita koa fanehoankevitra mivelabelatra kokoa ao amin'ny aterineto isika. Namoaka lahatsoratra tao amin'ilay sehatra fifampiresahana shinoa malaza be Xici.net [amin'ny teny shinoa] ny bilaogera iray mba hanehoany ny ahiahiany mikasika ny zavatra ambaran'ity fanadihadihana ity amin'ireo olana lalina ao Shina ankehitriny, indrindra fa eo amin'ny krizin'ny fitokisana [amin'ny teny shinoa]:
Raha nasehon'ny fanadihadihana toy ity fa ny olona toy ireo mpandraharaha amin'ny resaka fanorenana trano sy ireo olon-malaza no tsy azo atokisana indrindra, tsy nisy isalasalana satria ny tontolo amin'izao fotoana izao dia entin'ny vola ary fantatsika rehetra tsara fa ny vola no milina fototra.
Manohy toy izao ny mpanoratra [amin'ny teny shinoa]:
Izao anefa, gaga amin'ny zava-mitranga aho hoe ny olona tena malaza be eo amin'ny fiarahamonina toy ny mpahay siansa sy ny mpampianatra dia voasokajy ho miaraka amin'ireo ”tsy dia azo atokisana” ary ny fitokisana azy ireo dia mbola ambany noho ny an'ny mpampanofa vatana. Hafahafa izany satria ny mpampanofa vatana no voapetraka any amin'ny farany ambany amin'ny tohatra ara-tsosialy saingy izao, toa mbola ambony noho ny fitokisana ireo mpampianatra sy mpahay siansa ny fitokisana azy ireo. Fivadibadihana toe-javatra re izany !
Ho famaranana, mihevitra izy fa henatra ho an'ny fiarahamoniny izany [amin'ny teny shinoa]:
Ny dikan'ny fitokisana dia azo atokisana, marina ary mahatana ny fampanantenana natao. Noho izany, ny famitahana, fihatsarambelatsihy, lainga na ny fanaovana hosoka dia mifanohitra amin'izany dika izany. Tokony ho fitaratra ho an'ireo mpianatra ny mpanabe, na amin'ny alàlan'ny fampianarany ,na ny fihetsiny. Kanefa ankehitriny, heverina fa tsy tsara noho ny mpampanofa vatana ireo mpanabe. Tsy mahamenatra ve izany?
Mandinika ny lafiny tsaran'ity fanadihadihana ity ny anglisy iray mpitoraka bilaogy ary mihevitra fa efa an'ny lasa avokoa izao ny fanompoana ny olo-malaza [amin'ny teny anglisy]: